Ciidamadda Itoobiya oo guulo ka sheegtay howlgalka ismaamulka Tigray
Ciidanka Itoobiya oo guulo ka sheegtay howlgalka gobolka Tigray
By WARIYAHA ADDIS ABABA , GAROWE ONLINE
ADDIS ABABA, Ethiopia – Ciidamadda federaalka Itoobiya ayaa Axada maanta ah waxay sheegteen in ay la wareegeen magaaladda Idaga Hamus kuna sii jeedaan caasimada gobolka Tigray ee Mekele iyagoo ka imaanaya Adigrat.
Warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa warisay "Mekele waa gunaanudka howlgalka lagu fulinayo sharciga ee ka dhanka ah jeegaanka TPLF".
Xukuumadda Addis Ababa ayaa Sabtidii shalay ahayd waxay warisay in ay xoogaga TPLF ka qabsatay magaalooyinka Shire, Axum, Adwa iyo Adigrat.
Maadamaa khadka isgaarsiinta uu maqan yahay, ma jiraan illo wareeydo madax-banaan oo xaqiijinaya sheegashooyinka ciidamadda Itoobiya.
Xoogaga TPLF ayaan wali ka jawaabin sheegashooyinka wallow ay dhowr jeer horey uga dhawaajiyeen in aysan marnaba jiida dagaalka ka bixi doonin.
Colaadda ka oogan waqoyga Itoobiya ayaa sii galeysa todobaadkii saddexaad. Boqolaal isugu jira askar iyo shacab waxaa la xaqiijiyey in ay dhinteen. Kumanaan kale waxaa lasoo wariyey in ay u barakaceen waddanka Suudaan.
Baaqyadda xabad-joojinta iyo bilaabiladda wadahalo ee ka imaanaya Beesha Caalamka iyo ururada caalamiga ah waa kuwa isa soo taraya, hasa yeeshee, dhinacyadda dagaalamaya wali dheg-jalaq uma siinin qaylo-dhaantaas.
TPLF oo hubkii ugu cuslaa ay haysatay u adeegsatay colaada Itoobiya
Afrika 14.11.2020. 14:00
Xukuumadda Addis Ababa ayaa ficilkan ku tilmaamay "isku daygii ugu dambeeyay".
Waaran xiritaan ah oo loo jaray Jeneraalo kadib "qabsashda" Mekele
Afrika 29.11.2020. 10:35
UN-ka oo ka digay in colaada gobolka Tigray ay sababto dambiyo dagaal
Afrika 13.11.2020. 18:50
Colaada waqoyga Itoobiya: Caasimada ismaamulka Tigray oo "la duqeeyay"
Afrika 18.11.2020. 09:40
Walaac laga muujiyey xaalka ciidanka Tigray ee howlgalada UN-ka
Afrika 24.11.2020. 15:00
Baarlamaanka Ethiopia oo xasaanada ka qaadey 38 sarkaal Tigray ah
Afrika 12.11.2020. 14:45
Madaxweynaha Tigray oo sharaxay sababta ay u duqeeyeen Asmara
Afrika 15.11.2020. 16:00
Boqolaal "lagu dilay" colaadda gobolka Itoobiya ka tirsan ee Tigray
Afrika 09.11.2020. 17:45
Axmed: Madaxda DF waxay diinta ka saarayaan dadka ka aragtida duwan 01.12.2020. 21:00
Farmaajo oo looga digay in uu ololaha u isticmaalo siyaasada dibadda 01.12.2020. 20:35
Rooble oo la kulmay wakiilada Beesha Caalamka u fadhiya Muqdisho 01.12.2020. 18:00
Tanzania oo xirtey "dhalinyaro ay qoratay" Ahlu Sunna Waljameeca 01.12.2020. 17:00
Uhuru Kenyatta iyo Joe Biden oo wadahadal dhanka telefoonka yeeshay 01.12.2020. 14:20
Doorka haweenka ee doorashada Soomaaliya oo laga shiray 01.12.2020. 13:55